Akhihla esikaNandi amaciko ngokubhuntsha kwemicimbi - Ilanga News
Home Izindaba Akhihla esikaNandi amaciko ngokubhuntsha kwemicimbi
Akhihla esikaNandi amaciko ngokubhuntsha kwemicimbi
Athi azobulawa yindlala ngoba imicimbi yiyona ebeka isinkwa etafuleni
I-LADYSMITH Black Mambazo iphoqeleke ukuhlehlisa imizungezo yayo kulandela ukuqubuka kobhubhane.
SIKHULU isililo ngosomqhe-le (Coronavirus) endimeni yezobuciko njengoba ngeSonto uMengameli Cyril Ramaphosa wamemezela ukuthi akumele abantu bahlangane baze babe wu-100 endaweni eyodwa, osekwenze ukuba kubhuntshe imicimbi eminingi ebeka isinkwa etafuleni lamaciko asendimeni yezomculo.
Iningi lale micimbi obekufanele yenziwe ngasekupheleni kwale nyanga nangempelasonto yePhasika, ibisiqalile ukukhangiswa. Abaculi abaningi abebeqashwe kule micimbi bakhihla esikaNandi ngokulahlekelwa yisinkwa ngalesi sikhathi esibucayi kanje.
Iningi labaculi okuzwele kakhulu kubona, yilabo abacula umculo we-gospel, kwazise yibona abasuke bematasa ngalesi sikhathi sokuso-ndela kwePhasika.
UThinah Zungu ongomunye wabaculi be-gospel abathandwa kakhulu eNingizimu Afrika, uzwakalise enkulu indumalo ngokubhuntsha kwemicimbi ebalelwa kwewu-9 abeseqashwe kuyona.
Ekhuluma neLANGA, uthe uyakuqonda ukuthi akukho obekungenziwa njengoba kumele kubekwe impilo yabantu phambi-li.
“Okubuhlungu ngathi njengabaculi wukuthi siphila ngayo imicimbi, yiyona ebeka kakhulu isinkwa etafuleni,” kusho uThinah. Uthe okubalulekile manje wukuba kutholakale ngokushesha ikhambi ngoba uma siqhubeka lesi simo, kuzoba nzima kakhulu ukuphila emacikweni.
Uthe ngoNdasa (March) uwodwa nje, ibalelwa ku-R100 000 imali emlahlekele ngokubhuntsha kwale micimbi. “Ngeke ngazi ngoba kuseza uMbasa (April) nawo
onemicimbi yawo engeke isenzeka njengoba nePhasika ngingaliboni liqhubeka nemicimbi yalo uma kunjena,” kusho uThinah.
Omunye umculi okhihla esifanayo, nguBabo Ngcobo, othe miningi imicimbi esibhuntshile abeqashwe kuyona. Uthe nakuba ebesekhokheliwe imali yesibambiso, kuzoba nzima ukuyibuyisela emuva.
“Okubalulekile manje wukuba sibambisane nabahleli bemicimbi, kungabi wukuthi sekumele sibuyi-se imali, kodwa sithole indlela esingakwazi ukuvumelana ngayo njengoba isekhona indlela yokuba imicimbi iqhubeke ngokuhamba kwesikhathi,” kusho uBabo.
U-Irvin Sihlophe, ongomunye wabahleli bomcimbi waminyaka yonke, i-Uvukile Gospel Event, uthe nabo banqume ukuwuhlehlisa lo mcimbi ngenxa yokubhekelela impilo yabantu.
“Kubuhlungu ukuhlehlisa umcimbi ebese siqalile ukuwuhlela, kodwa kumele sibeke impilo phambili,” kusho uSihlophe evuma ukuthi nabo bazolahleke-lwa ngokuhlehlisa lo mcimbi obekumele ube ngempelasonto yePhasika.
Uthe ukhathazeke kakhulu ngamaciko aphila ngokunandisa emicimbini, okuyiwona azothinteka kakhulu ngalokhu.
Unxuse uhulumeni ukuba usebenzisane namaciko ukuxwayisa ngosomqhele. “Uma uhulumeni uzimisele ngokusiza amaciko ngalesi sikhathi, kumele ubeke wona phambili ngokuhambela imizi ufundise ngokuhlanzeka nangokugwema lesi sifo.
“Uma uhulumeni uzosebenzisa amaciko, azokwazi ukuphila nawo ngalesi sikhathi esinzima, kusho uSihlophe.
UXolani Majozi, ongumhleli weNanda Dam World Music Festival, uthe njengoba lo mcimbi ubuyingxenye yokugubha iminyaka ewu-60 iLadysmith Black Mambazo yasungulwa, basazowe-nza ngokuhamba kwesikhathi.
Uthe ngeke bayithathe imali abese beyikhokhile ukuqasha amaciko nezinye izinto.
“Sizoba nezivumelwano nalabo esisebenzisana nabo ukuze sikwazi ukuqhubeka nabo uma sesithole usuku olufanele,” kusho uMajozi obuye abe yimenenja yeMambazo.
Khona manjalo, kulindeleke ukuba iMambazo itheleke kuleli namhla-nje ngoLwesine lapho amalungu ayo ezobe eseyogcinwa endaweni ekhethekile izinsuku eziwu-14.
UMajozi uthe ukugcinwa kwamalungu aleli qembu izinsuku eziwu-14 akuchazi ukuthi kukhona izimpawu zikaso-mqhele anazo.
“Kusho ukulandela imigudu efanele yabantu abaqhamuka kwamanye amazwe njengomyalelo kahulumeni,” kusho uMajozi.
Bheka nasemakhasini alandelayo.
Previous articleKubhekwe isinqumo ngePSL
Next articleUDJ Zinhle ukhule ebizwa ngovilavoco